Doomo Kalluumeysi oo loogu deeqay Kalluumeysatada Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Wararka Doomo Kalluumeysi oo loogu deeqay Kalluumeysatada Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle
Doomo Kalluumeysi oo loogu deeqay Kalluumeysatada Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle
Hey’adda Qaramada Midoobay u qaabishan cunnada iyo beeraha (FAO), ayaa afartan doomood oo ah nuuca Huurida, waxa ay maanta ku wareejisay kalluumeysato ka kala socota dowlad gobaleedyada Hir-shabeelle iyo Koonfur Galbeed.
Deeqda doomahaha ah oo qayb ka ah barnaamijka shaqo abuurka dhallinyarada Soomaaliyeed iyo yareynta saboolnimada ayaa u fududeyneysa kalluumeysatada danta yar inay si fudud ugu soo jillaabtaan maadaama doomuhu aysan uga baahneyn, Matoor, shidaal iyo Dayactir
Munaasadda doomaha lagula wareejinayay kalluumeysatada ayaa waxaa goob joog ka ahaa wasiirrada shaqada Hirshabeelle iyo wasiirka kalluumeysiga Koonfur Galbeed, Cabdiqani Cabullaahi Maxamed.
Cabdiqani Cabullaahi Maxamed ayaa FAO uga mahad celiyay taageerada iyo shaqo abuurka ay la garab taagantahay ummadda Soomaaliyeed, waxuuna ugu baaqay dadka deeqda la siiyay inay ka faa’iideystaan oo ay ku dadaalaan sidii iyana ay u noqon lahaayeen dad isku filnaada kadibna bulshada caawiya.
Dr. Xuseen Cali Axmed oo ku hadlay afka FAO ayaa kalluumeysatada deeqda la siiyay kula dardaarmay inay si wanaagsan uga faa’iideystaan fursaddaan qaaliga ah.
Doomahaan oo ka sameysann fiberglass ayaa ah kuwa adkeysi badan, aan cilladoobeyn, sannado badan lagu shaqeysan karo, waxaana sidoo kale doomaha deeqda ah la socda dhammaan agarbka kale ee lagama maarmaanka ku ah kalluumeysatada xilliga ay jilllaabanayan.
FOA ayaa Kalluumeysatada ay doomaha ugu deeqday waxa ay maalmihii tegay Muqdisho ugu qaatay tababar lagu baranayo hannaanka ay u kalluumeysanayaan, bedqabkooda, agabka ay u baahanyihiin inay horay u sii qaataan marka ay jillaabasho teegayaan iyo hadii ay khatar ka kulmaan sida ay gurmad u dalban karaan.
Kalluumeysatada ka faa’iideystay tababarka oo ah afartan badmaax ayaa ka mahad celiyay tababarka iyo deeqda oo ay sheegeen in wax badan ay kusoo korhdin doonto qaab nololeedka qoysaskooda iyo deegaannadooda.